JINGYE ရေနွေးအိုးရေနွေးအိုးတစ်အိုးတစ်လုံးရှိသည် အထူး hemisphere အောက်ခြေ အပြည့်အဝဂျာကင်အင်္ကျီအလွှာနှင့်အတူနှင့်တစ် ဦး မှတဆင့်အပူ မှန်ပါတယ် hemisphere ဂျာကင်အင်္ကျီအလွှာ, ပစ္စည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ချက်ပြုတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အညီအမျှအပူကြောင်းသေချာပါစေ.
ပြီးတော့ hemisphere အောက်ခြေကြောင့်အပူပေးတဲ့largerရိယာကပိုကြီးလာပြီးဖောက်သည်တွေကိုစွမ်းအင်နည်းတယ်နဲ့ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ effect တွေရလာအောင်ကူညီပေးတယ်။
JINGYE Steam Jacketed ရေနွေးအိုးသည်ထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးစွမ်းသည်။
ထမင်း၊ အသားများ၊ ဟင်း၊ အချဉ်များ၊ Fudge, Toffee, Caramel, Jelies, Candies, Chocolate နှင့်အခြားအချိုမှုများသောပစ္စည်းများကဲ့သို့သော!
JINGYE Steam Jacketed ရေနွေးအိုးသည် Catering Centres များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဆေးရုံများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအစားအစာထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်စက်ဖြစ်သည်။
1. စွမ်းရည်: 50L, 100L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L, etc;
3. ဗို့အား:3အဆင့် 220/240/380 / 415V, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံစံချိန်စံညွှန်းမီ;
4. အပူအမျိုးအစား: အရည်ပရိုပိန်း (LPG), လျှပ်စစ်, ရေနွေးငွေ့;
5. သန့်ရှင်းရေးအနားကွပ် & အဆို့ရှင်;
၆။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - လက်ဖြင့်စောင်းခြင်း၊ အလိုအလျှောက်စောင်းခြင်းနှင့်စာရေးကိရိယာအမျိုးအစား၊
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းဖြစ်စဉ်ကိုလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန် 7. လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများ;
ကောင်းသောရောနှောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် 4. နှစ်ဆရွေ့လျားမှုလည်ပတ် stirrer နှင့်အတူ;
အတွင်းပိုင်း / ဂျာကင်အင်္ကျီ